We She Me: ကြက်ဥနဲ့ ကြက်
Anonymous - 7/27/08, 7:27 PM
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခုနကပဲ အမြန်ပြီးတဲ့ ကြက်ဥကြော် စားလိုက်သေးတယ် ။ cage နဲ့ မွေးနည်းကတော့ အလွန်ရက်စက်လွန်းလှတယ်နော် ။ ဒါကြောင့်လည်း လူတွေ သတ်၂လွတ် စားလာကြတယ် ထင်တယ် ။
ဒီပို့စ်ရေးဖို့ သေချာ လေ့လာထားတဲ့ ကိုအန်ဒီ့အချိန်တွေကို တန်ဖိုးထားမိပါတယ် ။ ဒါနဲ့ အမကရော ၀ိုင်းလေ့လာပေးလာဟင်း)
imaginary clouds no2- 7/27/08, 7:46 PM
ဒီဆောင်းပါးလေး အရမ်းကောင်းတယ် အန်ဒီ ။
Anonymous - 7/27/08, 8:06 PM
ဆိုင်က ကြက်တကောင် ၀ယ်ထားတာ ခုဖတ်ပြီးမှ ချက်စားရမှာတောင် တွန့်သွားပြီး သက်သတ်လွတ် စားချင်သလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် မသိသေးတာ သိရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးဗျို့
မဇနိ - 7/27/08, 10:30 PM
တခါမှ အဲဒီလို တွေးမကြည့်မိဘူးဗျ။ အစကတည်းက အသားတွေမကြိုက်၊ ကြက်ဥလည်း သ်ိပ်မစားချင်တာ အခု စားရမှာ တွန့်သွားပြီ။ ရေးထားတာ ဗဟုသုတတွေ ရတယ် အကိုနဲ့ အမ ကျေးဇူးဗျ။
MrDBA - 7/28/08, 12:00 AM
ငါးဘဲ စားရင်ကောင်းမလားဘဲဗျ ..
My Wonderful Moral Thoughts - 7/28/08, 1:10 AM
နန္ဒာကတော့ Free Range Egg နဲ့ Farm Fresh ကြက် ကို ငယ်ငယ်ထဲက မိဘတွေ သင်ထားလို့ အမြဲ ဝယ်စားဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့ Close ဖြစ်သူတွေကိုလဲ အဲလို ဝယ်စားဖြစ်ဖို့ အမြဲ encourage လုပ်ဖြစ်တယ်..
မကြာသေးခင်က UK မှာ Channel4ကနေ နာမည်ကြီး Chef တယောက်ဖြစ်တဲ့ Jamie Oliver ဆိုသူက ဒီလို အကြောင်းတွကို Program တခုအနေနဲ့ ပြသွားတာလဲ ကြည့်လိုက်ရတယ်.. တကယ့်ကို အသိပညာရစေပါတယ်... အဲဒီ Program ကြည့်ပြီး တော်တော် ခံစားလိုက်ရတယ်...
ကိုAndy ရေးသလို လူတွေ Eggs နဲ့ Chicken ဝယ်တဲ့အခါ Considerate ဖြစ်ကြမယ်ဆို သိပ်ကောင်းမှာဘဲလို့ တွေးမိတယ်။
Anonymous - 7/28/08, 8:37 AM
ကိုအန်ဒီ ပြောမှဘဲ စုံစုံလင်လင် သိတော့တယ်...
ကြက်သား ဘဲ အများဆုံး စားဖြစ်တာ ဆိုတော့ ...
အခုတော့ ကိုယ်ချင်းစာ တတ်သွားပြီ...
သတ်သတ်လွတ် စားဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့် ပါအုံးမယ်...
nu-san - 7/28/08, 1:35 PM
Andy ရေ.. ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ကြက်သား/ ကြက်ဥ ကို မစားချင်တော့ဘူး.. ကြက်တွေကို သနားလို့... အရင်ကတော့ အဲဒီလောက် မတွေးမိတာ အမှန်ပဲ.. အခုလို ပြန်ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ Andy!!
Andy Myint - 7/28/08, 9:28 PM
သိလိုက်ရတာ နောက်မကျသေးလို့ တော်သေးတယ် တီတီဂျစ်။ နောက်ကိုတော့ Cage Egg မစားတော့ဘူး။ အစ်မက ၀ိုင်းစစ်ပေးတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ စာရေးဖို့ သူဆီက အကြံရတယ်လေ။
ဆောင်းပါးတော့ မခေါ်ရဲပါဘူး မောင်တိန်။ Post လောက်ပဲ ခေါ်ရဲတယ်။
အလွန်အကြူး မစားရင်၊ Cage Egg မစားရင်တော့ ရမယ်ထင်တာပဲ စာဖတ်သူ။ သက်သက်လွတ်စားနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲ။
ကျွန်တော်လည်း အခုမှ အသေအချာ သိလို့ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ပြီး ရေးလိုက်တာ မဇနိ။ ကောင်းတယ် အသားမကြိုက်တတ်တာ။
ငါးက ဈေးကြီးတယ်ဗျ Mr. DBA။ တစ်ခါစားက ကြက်နှစ်ကောင် ဈေးထက် ပိုများနေတယ်။
ကောင်းတာပေါ့ ညီမနန္ဒာ။ ဟုတ်တယ် အဲဒီ အစီအစဉ် ကြည့်ပြီး ရေးလိုက်တာလေ။
သက်သက်လွတ် စားနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတယ် စာဖတ်သူ။ ကျွန်တော်တော့ မရသေးဘူး။
ဟုတ်တယ် အစတုန်းက ဘာကြောင့် ဈေးကွာနေလဲ မသိဘူးလေ မနုစံ။ Free Range တွေ ဘာတွေက ဘာများ အဟာရ ပိုဖြစ်မှာလဲ တွေးပြီးတော့ ဈေးပေါတာပဲ ၀ယ်ဝယ် စားနေတာ။ အခုတော့ နည်းနည်းပိုပေးပြီး Cage Egg ကို ရှောင်တော့မယ်။
ပီတိ - 7/29/08, 1:10 AM
ရုံးမှာ ကြက် အကြောင်းကိုဖတ်သွားပြီးသနားသွားတယ်။ ရုံးကအပြန် ညစာစားဖို့ ဆိုင်တွေဝင်ကြည့်တော့လည်း စားချင်စိတ်မရှိ။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဘာစားစရာကြည့်တော့ ပေါင်မုန့်နဲ့ ကြက်ဥပဲရှိလေရဲ့။ ကြက်အကြောင်းဖတ် ပြီး ကြက်ဥစားချင်စိတ်သိပ်မရှိပေမယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုသနားတာနဲ့ ဟာတာတာဖြစ်နေတဲ့ဗိုက် ပြည့်သွားအောင် ကြက်ဥလေးကြော် ပေါင်မုန့်လေးနဲ့စား.... အင်း... အရသာရှိလိုက်တာ....
ကျောက်မင်းနိုင် - 7/29/08, 1:18 AM
Kay - 7/29/08, 2:39 AM
ကြက်သားလဲ မစားရက်..ကြက်ဥ လဲ..မစားနိုင် ဖြစ်ရ ပါလား။ ဒါပေမဲ့..ဘယ်နှယ့်လုပ်မလည်း.. တယောက်တပြန် စားနေ တဲ့..ဒီကမ္ဘာကြီး ထဲ.. လူတွေ ကိုလည်း..လူတွေ ကစား..။ ဘာပဲပြောပြော..ပညာပေး ပို့စ်လေး တခု..။ အနဲဆုံးတော့..ကြက်ဥ ကြက်သားစားခါ နီးတိုင်း.. ကြင်နာ အသိစိတ်ကလေး နဲ့.. စား ဖြစ် မယ်ထင်ပါရဲ့။
Anonymous - 7/29/08, 1:26 PM
အလုပ်ရှုတ်တဲ့ အချိန်ဆို ကြက်ဥက အမြန်ဆုံး။ လုံးဝ မစားပဲတော့ မနေနိုင်လို့ ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီး နောက်ဆို ကပ်စေးနဲပေမယ့် Free Range Egg or Farm
Fresh Egg ပဲစားတော့မယ်။ စာဖတ်ပရိသတ်ရှိပြီးသား wesheme family ကိုကျေှးဇူးပါ။ ဒီဆောင်းပါးဖတ်ပြီး စာဖတ်သူတော်တော်
များများ ကြက်တွေက်ို ကိုယ်ချင်းစာပြီး အစားနဲသွားမှာ Or ရွေးဝယ်ဖြစ်မှာ သေချာတယ်။
TZA - 7/30/08, 1:28 AM
မြန်မာပြည်က CP ကြက်ဆိုတာ ယိုးဒယား Charoen Pokphand ကိုပြောတာထင်တယ်၊ ကျနော်အဆက်ပြတ်နေတာ ကြာလှပြီဆိုတော့ ထင်တာပြောတာ။ အင်း၊ ဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ကြက်ဖြစ်ရင်တောင် သေတဲ့အထိ ဥတပြွတ်ပြွတ် ဥပေးရတဲ့ဥစားကြက်မကြီး မဖြစ်ရပါစေနဲ့ဘုရား လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်၊ သွပ်သွပ်။
Andy Myint - 7/30/08, 1:29 PM
Free Range လိုမျိုး ၀ယ်စားလေ ကိုပီတိ ဒါဆို ဗိုက်လည်း ပြည့်၊ နောက်ကျောလည်း လုံတာပေါ့။
ကျေးဇူး မကေ။ ဟုတ်တယ် ကြင်နာစိတ်ထားပြီး စားမယ် ဆိုရင် အာပတ် လွတ်နိုင်တယ် အဟီး
အင်း အားလုံးက Cage Egg ကို ရှောင်မယ်ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ စာဖတ်သူ
ဟုတ်တယ် TZA အဲဒီ ကြက်တွေကို ပြောတာ။ သူတို့ဆီက အကောင်ပေါက်တွေ မျိုးတွေ သွင်းလာလို့ CP ကြက်လို့ ခေါ်ကြတယ်။
forgetme - 8/7/08, 2:08 PM
အခုလို ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
သက်သတ်လွတ်စားလာတာ လေးနှစ် ပြည့်တော့မယ်..
ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ရှင်သန်မှုတစ်ခု အတွက်...
“ ကိုယ်.. ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ရော သူများအစာအတွက် အသက်အသေခံနိုင်မှာလား..” “ မခံနိုင်ဘူး...” “ ဒီလိုဆိုရင် သူများအသက်လည်း ငါမစားတော့ဘူး..” ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ရင်း မစားဖြစ်တော့တာပဲ...
မြန်မာမှာ နေတုန်းက အသီးအရွက်ပေါတော့ သက်သတ်လွတ်စားရတာ အဆင်ပြေပေမဲ့ အသီးအနှံ ဈေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သက်သတ်လွတ်စားရတာ မလွယ်လှပါဘူး...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် “ ကိုယ့်ရဲ့ အသက်ရှင်သန်နေထိုင်မှုဟာ လောကကြီးက ဘယ်သတ္တ၀ါကိုမှ သေဆုံးမှု မဖြစ်စေဘူး ” လို့ တွေးရင်း ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ရတာ တစ်ချက်တည်းနဲ့ အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါတယ်...
Nge Naing - 8/8/08, 11:54 AM
ကျွန်မက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြိုက်ပြီး အသားမကြိုက်တဲ့အတွက်ရော သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသက်ကို တန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ပါ အသားမစားဘူး ဒါပေမယ့် ကြက်ဥတော့စားတယ်။ အခု ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီး ကြက်ဥတောင်မစားချင်တော့ပဲ ဖြစ်သွားပြီ။
Andy Myint - 8/8/08, 8:52 PM
သာဓုပါ forgetme။ ကျွန်တော်တို့လည်း တစ်ပတ်မှာ တစ်ခါလောက် သက်သက်လွတ် စားဖို့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမယ်။
Cage Egg လောက် ရှောင်ရင် ရမယ် ထင်တယ် မငယ်နိုင်။ ဒါပေမယ့် Cage Egg က ဘလာဥတွေဆိုတော့ တစ်ဖက်က ကြည့်ပြန်တော့လည်း အာပတ်လွတ်တယ်နော်။
Ko Paw - 8/10/08, 4:14 AM
အင်း.... ဒီပုံအတိုင်းဆိုရင် Universal Declaration of Chicken Rights, (not Chicken rice..ah!) တွေလည်း လိုနေပြီ ထင်ပါရဲ့။ ကြက်မွေးမြူရေး နည်းစနစ်တွေအကြောင်း ရေးထားတာ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။ အဲဒီလို တိရိစ္ဆာန်တွေကို ညှဉ်းဆဲရာကျတဲ့ နည်းတွေကိုတော့ ရှောင့်သင့်တာပေါ့နော်။ ဒစ်စကာဗာရီမှာ တခါတခါပြနေတာလည်း ကြည့်ရတယ်။ ပီကင်းဘဲကင်အတွက် ဘဲတွေမွေးတာလေ။ အကောင်တွေ မြန်မြန်ဝဖီးလာအောင် အစာကျွေးပုံက တကောင်ပြီးတကောင် လည်ပင်းဆွဲ၊ ပါးစပ်ကို အတင်းဟပြီး အစာကို ပြွတ်ထည့်ပုံမြင်ရတော့ “ဘဲကလေးတွေ သနားတယ်” ဖြစ်သွားလေတယ်။ (ဒါပေမယ့် အချိန်တန်တော့ ဘဲကင်မစားဘဲ ဘယ်နေပါ့မလဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားစိတ်က ပိုနေတာကိုး)
ဒါပေမယ့် တဖက်ကကြည့်ပြန်တော့လည်း သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်သက်လွတ်စားတာက ကုသိုလ်ပိုရတယ်လို့ ထင်သူတွေအတွက် ကျနော်ဖတ်ဘူးမှတ်ဘူးတာလေးကို မျှဝေချင်လာပြန်ရော။
Australian လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတယောက်ရေးတဲ့ Good Questions, Good Answers ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကပါ။ အင်တာနက်မှာ ရှာပြီး ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်လ် ဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးခွန်းလေးတွေကို လိုရင်းတိုရှင်း ဖြေထားတာပေါ့နော်။ သက်သတ်လွတ်စားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ နောက်ဆုံးအခန်းမှာ ပါတယ်။
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် သတ္တ၀ါတွေရဲ့ အသက်ကို သွယ်ဝိုက်ပြီး သတ်ခြင်းနဲ့တော့ မကင်းနိုင်ဘူးတဲ့။ ဥပမာပြောရရင် သက်သတ်လွတ်စားတဲ့လူတွေရဲ့ ထမင်းစားပွဲပေါ်ကို သစ်သီးဝလံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ပိုးထိုးပေါက် မပါဘဲ ရောက်လာစေဘို့ လယ်သမားဟာ သူ့စိုက်ခင်းကို ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းရပါသတဲ့။ ပိုးကောင်က အကောင်ငယ်လို့ သူ့အသက်က ဘဲတွေ၊ကြက်တွေ၊ နွားတွေ၊ ၀က်တွေရဲ့ အသက်လောက် တန်ဘိုးမရှိဘူးလို့ မယူဆပါနဲ့တဲ့။ သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ ကိုယ့်အသက်ကိုယ် ချစ်မြတ်နိုးကြတာချည်းပါဘဲတဲ့။
အလားတူ ဆပ်ပြာတို့ ဘာတို့မှာ ပါတဲ့ တိရိစ္ဆာန်အဆီတွေ၊ သားရေပစ္စည်းတွေ၊ ဖိနပ်တွေ ခါးပတ်တွေမှာ သုံးတဲ့ သားရေပစ္စည်းတွေအတွက်လည်း တိရိစ္ဆာန်တွေ များစွာ သေကြေနေရပါသတဲ့။
အဆုံးစွန်ပြောရရင် လူတွေသောက်နေတဲ့ Antibiotics တွေကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို သတ်တာ၊ ချည့်နဲ့သွားအောင် လုပ်တာဘဲတဲ့။
အဲသည်တော့ သက်သတ်လွတ်စားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောသွားတာလေးတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။
သက်သတ်လွတ်စားပြီး စိတ်စေတနာ မကောင်းတဲ့လူနဲ့ သူ့အသက်တော့ စားတယ်၊ စိတ်နှလုံး ဖြူစင်ကြယ်တဲ့လူ ဘယ်သူက ပိုမြတ်သလဲတဲ့။ စိတ်နှလုံး ဖြူစင်ကြယ်သူက ပိုမြတ်တယ်ဆိုတော့....
လောကကြီးမှာ စိတ်နှလုံးဖြူစင်ကြယ်ဘို့က စားတဲ့အာဟာရထဲမှာ ပါတဲ့ အမျိုးအမည်တွေထက် ပိုမို အရေးကြီးပါသတဲ့။
But people find it easier to change the content of the diet instead of changing the content of their heart.....တဲ့။
ကျန်းမာရေးအတွက်....သက်သတ်လွတ်စားတာကတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့။ ဒါပေမယ့် တိရိစ္ဆာန်လောကကြီးကို ကယ်တင်ဘို့ စားသောက်တာဆိုရင်တော့ ထိရောက်မှုမရှိဘူးတဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စောစောကဆိုခဲ့တဲ့ Indirect killing က ရှောင်လွှဲလို့ မဖြစ်နိုင်လို့ပါတဲ့ ကိုအင်ဒီရေ။ (သော်တာဆွေရေးတဲ့ သက်သတ်လွတ်တော့စားတယ်၊ နွားနို့တော့သောက်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်....နွားကလေးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို ရေးထားတာ တခါက ဖတ်ရတာလည်း စိတ်မကောင်းစရာ)
ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ကျနော်လည်း အဲသည် အခန်းကလေးကို ဖတ်ပြီးကတည်းက.....
Anonymous - 8/10/08, 2:44 PM
သက်သတ်လွတ်စားပြီး စိတ်နှလုံးလဲ ဖြူစင်တယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲစားတဲ့သူက အသားစားတဲ့သူထက်
energy ပိုနဲတဲ့အတွက် စိတ်အလိုမကျစရာတွေ့လာရင်တောင် ဒေါသထွက်ရင် အထွက်နဲပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြုအမူ နဲ့ စကားတွေလဲ နဲသွားပါတယ်။ ပြီး ငါ သတ္တ၀ါအသက်တောင် ကုသိုလ်ဖြစ်အောင် ရှောင်ပြီးမှ
လို့ သတိရမိတဲ့အခါ ဒေါသအပြင် တခြားအကုသိုလ်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ သတိနဲ့ ထိန်းပြီး ပျက်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ရာသက်ပန် သက်သက်လွတ်ချည်းပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မစားနိုင်သေးပေမယ့်
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ခန္ဓာက ဖြစ်ပျက်နေတာကို သတိထားမိသလောက် ပြောပြတာပါ။
Andy Myint - 8/10/08, 7:04 PM
ဟားဟားဟား.. Universal Declaration of Chicken Rights (not Rice) ဆိုတာကို သဘောကျတယ် ကိုပေါ။
ကျွန်တော်က ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သက်သက်လွတ် မစားနိုင်ပေမယ့် သက်သက်လွတ် စားလို့ အကျိုးမဲ့တယ်လို့ မထင်မိဘဲ မစားရင် မစားသလောက်တော့ သတ္တ၀ါတွေ လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာရာ ရတယ်လည်း မှတ်နေတဲ့ သူပါ။ ကျွန်တော်က ဘုရား၊ တရားလည်း မလုပ်တဲ့သူ ပြီးတော့ ဘုရားစာတွေ ဘာတွေတော့ မဖတ်ဖူးပါဘူး။ လူကြီးတွေ ပြောနေတာတော့ ကြားနေရပါတယ်။ ဘယ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ သက်သက်လွတ် စားဖို့ ဘုရားဟောထားတာ မဟုတ်တဲ့ အကြောင်းတို့ ဘာတို့။
သက်သက်လွတ် စားဖို့ထက် စိတ်နှလုံး ဖြူစင်ဖို့ အရေးကြီးတယ် ဆိုတာလည်း ကျွန်တော်တို့ အော်မနီဗိုးရက်စ်တွေရဲ့ လက်သုံး စကားပဲလေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုတိုင် တစ်ခါတစ်လေ စားကြည့်တဲ့ အခါ ကျင့်ကြံဖို့ အတော်အတန် ခက်ခဲ ကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သက်သက်လွတ်ဆိုတာ အသား၊ငါးမပါ တဲ့ အစားအစာတွေကို ပဲ ပြောတာပါ။ ကိုယ့်ကြောင့် ဒီနေ့ တစ်နေ့လုံး ဘာသတ္တ၀ါမှ မသေစေရဘူးလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သက်သက်လွတ်စားရတာ အရက်သေစာ မသောက်စားဖို့ ထိန်းချုပ်ရတာထက် ပိုခက်ခဲပါတယ်။ အရက်ကတော့ ငါဒီလ အရက် မသောက်ဘူးကွာ ဆိုရင် နေလို့ ရတယ်။ ဘော်ဘော်တွေကို ရှောင်နေရင် ပြီးရော။ အသားမပါဘဲ တစ်လလောက်ကတော့ စိတ်တောင် မကူးဖူးဘူး။ ဒီလိုသာ သက်သက်လွတ် စားသလိုမျိုး ထိန်းချုပ်တတ်လာရင် သီလတွေ ဘာတွေ ထိန်းဖို့လည်း Will Power တက်လာမယ် ထင်တယ်နော့်။ အဲဒါကြောင့်များလား မသိ ကျွန်တော် တွေဖူးတဲ့ မြန်မာတွေ ထဲမှာ - တရုတ်မဟာယနတွေ မပါ - သက်သက်လွတ် စားတဲ့ သူတွေဟာ တခြားသူတွေထက် (အနည်းဆုံးတော့ ကျွန်တော့်ထက်) ပိုပြီး သည်းခံ အောင့်အီးတတ်ကြောင်း၊ ချုပ်တီး သည်းခံနိုင်ကြောင်း၊ မေတ္တာပွား ဒေါသနည်းတတ်ကြောင်းကိုတော့ ကိုယ်တွေ့ပါပဲ။ တွေ့ဖူးသမျှ သက်သက်လွတ် စားတဲ့ သူတွေဟာလည်း ဘုရား တရားကို ပိုပြီး သက်ဝင် ယုံကြည်တာတွေ့ရပါတယ်။ သီလစောင့်တယ်။ ဥပုသ်စောင့်တယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ များပါတယ်။
ကျွန်တော်လည်း လူပျိုတုန်းက အိမ်က စားတော့ ကြာသပတေးနေ့ ဆိုရင် သက်သက်လွတ် စားဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာဆိုရင်ပေါ့လေ။ အပြင်ရောက်လို လက်ဘက်ရည် ဆိုင်မှာ ပေါက်စီတွေ ဘာတွေ စားမိတာလည်း ရှိတာပဲ။ အခုတော့ မစားဖြစ်ပါဘူး။ စားမလားတောင် စိတ်ကူးနေတာ။ ဘယ်သူကမှတော့ ကြက်သားဟင်း စားနေချိန်မှာ ကောင်းလိုက်တာ ကြက်မသား ကြက် လည်မျိုကို ဓါးနဲ့ လှီးပြီး ချက်စားလိုက်ရတာ အရသာ ရှိလိုက်တာ မတွေးကြတော့ စားနေတဲ့ သူတွေလည်း ငရဲတွေဘာတွေ မကြီးလောက်ပါဘူး။ သက်သက်လွတ် စားတဲ့ သူတွေကတော့ စားနေတိုင်း ငါဒီလို တစ်ပတ်လောက် သက်သက်လွတ် စားလိုက်တာ ကြက်တစ်ကောင်လောက် ငါကြောင့် မသေတော့ဘူးလို့ တွေးမိမှာ ဆိုတော့ ကုသိုလ် မရတောင် (စုဗူးလေး တကိုင်ကိုင်နဲ့ ငွေစုတဲ့ သူတွေ ကြည်နုးသလိုမျိုး) စိတ်ကြည်နူးရမှာပါ။ ဒါတွေက ကျွန်တော် ထင်တာကို ပြောတာပါ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ဘာစာအုပ်မှ မဖတ်ဖူးတော့ တကယ် ကုသိုလ် ရမရတော့ ကျွန်တော်လည်း မသိဘူးလေ။
ကိုယ်က ၉၀% သိပ္ပံသမားဆိုတော့ အမဲသား မစားရင် သံဓါတ်နည်းမယ်နော်တို့ ဘာတို့တောင် မိန်းမကို အားပေးပြီး စားခိုင်းနေတာပါ။ အသားစား မကြူးရင်၊ တိရစ္ဆာန်တွေကို ရက်စက်ရာ မကျရင် စားမှာပဲ ဆိုတဲ့သူပါ။ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေတော့ မစားချင်ပါဘူး။ ဖားသားတို့ ဘာသားတို့။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းတော့ ကြက်ဥဆို ဈေးနှစ်ဆ ပေးရတဲ့ ခြံကြက်ဥတွေပဲ ၀ယ်စားတော့တယ်။ အဲဒီလိုမျိုး လုပ်နိုင်သလောက်တော့ လုပ်ပေးလိုက်မယ်လေ။ ကုသိုလ်ရတာ မရတာ အသာထား ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရင် ပြီးတာပဲ။
Anonymous - 2/1/10, 6:04 AM
Mr Andy..how to make Cage egg without male fowl they are alraedy died,female fowl have no chance to meet male fowl in Cage.Please share ur knowlege thanksyou . MR SG
အဲနဲာ ပညာစိုတ် - 12/10/11, 8:26 PM
ဖတ်ပြီးပါဘိ.. တော်တော်လေး ခံ စားရပါတယ်.. ကြက်သားကတော့ အိမ်သူသက်ထား ချက် ကြွေးရင် စားနေရတုံးပါဘဲ
ဇင်အောင် - 12/10/11, 10:23 PM
မြန်မာက လူတွေပါ ဖတ်စေချင်လို့ဖေ့ဘွတ်မှာ မူရင်းရေးသူနဲ့ ဘလော့ကို ရည်ညွှန်း ပေးပြီ ဖေါ်ပြချင်ပါတယ်။ http://facebook.com/zinaung
Anonymous - 12/10/11, 10:50 PM
ခု ဗမာပြည်က ဖတ်တာဗျ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) - 12/11/11, 2:15 PM
သက်သတ်လွတ်သမားတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကြက်တွေကို ခုလိုနည်းနဲ့ မတရားကြီးထွားအောင် ဥအောင်လုပ်တာမျိုးတော့ မကြိုက်ပါဘူး။ လူတွေရဲ့ လောဘကြောင့် သတ္တဝါတွေမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ နေထိုင်မှုမျိုးကို ရောက်နေရရှာတယ်။
ကြည့်ရတာ စိတ်ထဲ တကယ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်...
Anonymous - 12/12/11, 5:39 AM
ယောနိသော မနသိကာယ .. ပါ ပဲ အကို.. တချို့အကြောင်းအရာ တွေဟာ သူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူက ကိုယ့် အတွက် ခါးသီးပေမဲ့ သူ့ အတွက်တော့မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေပါတယ်..လှေင်အိမ်စနစ်ကတော့ကိုယ်ကောင်းဖို့ အတွက်တော့သူတို့ ဘ၀လေးတွေ သိပ်နစ်နာနေသလိုပါပဲ.. တင်းကုပ်စနစ်ကသူတို့ အတွက်အသက်ရှူချောင်နိုင်ပေမဲ့ ၀ယ်ဈေးအနယ်ငယ်မြင့်နိုင်ပါတယ်..မြင့်ပေမဲ့လည်း ညှာတာတတ်တဲ့သူအတွက်ပေးပျော်ပါတယ်လေ..(ဂရုဏာအမြင်)
နောက်ရှုထောင့်တစ်ခုကတော့ သူတို့ အကြောင်းကံကို က ဒီလိုနေရဖို့ကို ဒီလို ဘ၀နဲ့ဖြစ်လာတာ ဒီလို ခေတ်ကြီးထဲမှာဖြစ်လာတာ.. ကိုယ် က သူ့ အကြောင်းကံကို ဘာ လို့လက်ဝင်ခံရမှာလဲ..သူဘ၀နဲ့သူပဲဆို ပြီး မာကြောတဲ့နှလုံးသား နဲ့လျစ်လျူရှု့ပစ်နိုင်ပါတယ်..ကျွန်မမြင်တာကိုပြောတာပါ..
Anonymous - 12/12/11, 6:38 PM
ကျွန်တော်လည်း ဆရာတော်တပါး ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုလြာ့ပီးတရားဟောတုန်းက အခွေတစ်ခွေကို projector နဲ့ပြပြီး တိရိစ္ဆာန်တွေ ဘယ်လို နည်းနဲတစ်ရက်တစ်ရက် ကို လူတွေစားသုံးဖို့အတွက် သေနေရာတာ ကိုကြည့်ပြီး အသားကို မစားချင်ရလောက်အောင် ဖြစ်သွားပြီး သနားလွန်းလို့ပါ.. သက်သက်လွတ် နေဖြစ်နေတာ ... စဉ်းစားလိုက်တော့ ကြက်သားမစားဘဲ ကြက်ဥ စားပြန်ရင်.... တတ်နိုင်ရင်အကုန်ေ၇ှာင်မယ်ကွာ ဆိုပြီး ကြက်ဥလည်းမစားဖြစ်တော့ပါဘူး ...အခုဒီစာလေးဖတ်ရတော့ မှန်နေေ၇ာ...
Anonymous - 12/15/11, 12:27 AM
အခုခေတ်မှာ နွားနို့ နဲ့ နို့ထွက် ပစ္စည်း ထုတ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာ .. နွားကို မွေးပြီးတာနဲ့ အမေနဲ့ ခွဲထားလိုက်ပါတယ် ။ အမေနို့ မစို့ရတော့ နွားပေါက်ဟာ ငတ်ပြီးသေပါတယ် ။ အဲဒါ ကို နွားပေါက်သား နုညံ့တဲ့ အသားဆိုပြီး ရောင်းပါတယ် ။ နွားပေါက် တွေအသေခံပြီး မှ ရတဲ့ နို့ဖြစ်လို့ သက်သတ်မလွတ်ဘူးလို့ မဟာယာန ဘုန်းကြီးတပါးက ပြောဖူးပါတယ် ။ ( ဒီပြောဆိုချက်ဟာ အငြင်းပွားစရာတခုပါ ) ။ မြန်မာပြည်က နွားနို့က ဒီနည်းနဲ့ရတာ မဟုတ်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကို အလုံးအရင်းဝင်နေတဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း တွေကတော့ ဒီနည်းနဲ့ရထားတာပါ ။ ဘယ်မိခင်မဆို ကိုယ့်ရင်သွေးကို အသေခံပြီး နို့ကိုတော့ပေးကြမှာ မဟုတ်ဘူး ။..
akm - 3/11/14, 4:35 PM
akm - 3/11/14, 4:38 PM
Dr Vurus - 2/19/17, 12:28 AM
အိမ် ကြက် အစ် သယ် ဘက်